No. 2137,Sunday, May 26, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2137,Sunday, May 26, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၈ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ မေ ၂၆၊ ၂၀၁၉)
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဒဂုံ စင်တာ(၁)အရှေ့ဘက် မဟာ ဘောဂလမ်းရှိ အထပ်မြင့်တိုက် ခန်းတွင် ယမန်နေ့ညဦးပိုင်းက လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးကို မိနစ် ၂၀ ခန့်အတွင်း ငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတောင် ပိုင်းတွင် Agung (အာဂွန်) မီး တောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားနေ သော်လည်း ခရီးသွားများ လည် ပတ်သည့်နေရာနှင့် ဝေးကွာသော ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ မည့် ဘာလီခရီးစဉ်များ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဟု Tango ခရီးသွား ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ မခေါင
လာမည့် ကျောင်းဖွင့် ချိန်တွင် စတင်သင်ကြားမည့် Grade-3 နှင့် Grade-6 သင်ရိုးသစ်များအတွက် နွေရာသီကာလ၌ သင်ပြနည်းသင်တန်းဖွင့်ခဲ့ရာ သင်တန်းကာလအတွင်း အ ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆရာ၊ဆရာမ ၁၁ ဦး သေဆုံးပြီး ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီ
လမိုင်းမြို့တွင် စုကြေးငွေကိစ္စကြောင့် လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ် ကာ ပဋိပက္ခဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကြမ်းဖက်မှုများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေအရ ပစ်ခတ်တားဆီးရမည့်အဆင့်ရောက် လာပါက ပစ်ခတ်တားဆီးရန် မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗ
ဘာစီလိုနာ - အနီးကပ်ဆုံးပြိုင် ဘက် ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူးမက် ဘီက ပြင်သစ်လီဂူးဝမ်း ရာသီအပိတ်ပွဲတွင်လိုအပ်သော သွင်းဂိုးလေးဂိုး သွင်းယူနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဘာစီလိုနာကြယ်ပွင့်မက် ဆီသည် ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက် သိမ်းပိုက်နိုင် သော ပထမဆုံးကစာ
တနင်္သာရီတိုင်း လောင်းလုံးမြို့နယ်တွင် အသက်(၁၉)နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသတ် ခံရပြီး ရော်ဘာခြံတစ်ခုအတွင်း အလောင်းစွန့်ပစ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း မောင်းမကန်နယ်မြေရဲ စခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြော သည်။
LNG ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် လျှပ် စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မည့် မီး လင်းချိုင်ကျေးရွာရှိ တောင်သူများ ပိုင်ဆိုင်သော မြေဧက ၈၀၀ ကျော်အတွက် နစ်နာကြေးပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်၊ စွမ်း အင်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ကျွဲ၊ နွားများနှင့် စပ် လျဉ်းသည့် လုပ်ကိုင်ခွင့်အာဏာ ကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အ စိုးရများထံမှ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနသို့ ပြောင်းလဲအပ်နှင်းကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရက မေလ ၂၂ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာ သည်။
စီးပွားရေးကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သုံးနှစ်တာအတွင်း လေးဆတိုးလာဟု ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
အစိုးရသစ်တက်ပြီး သုံးနှစ်အတွင်း ကရင်ပြည်နယ် တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်တစ် ဦးချင်းဝင်ငွေပမာဏများ တိုး တက်ခဲ့သဖြင့်စီးပွားရေးတိုးတက် လာသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ် နန်းခင်ထွေးမြင့်က ပြောသည်။
မန္တလေး၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ နည်းပညာနှင့်ငွေကြေးကူညီမည်ဟု အီးယူသံအမတ်ကြီးပြောကြား
ဥရောပနိုင်ငံများမှ စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ မန္တလေး သို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမို ပြုလုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နည်း ပညာနှင့် ငွေကြေးအကူအညီများ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) သံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt ကပြောသည
ဘော်လခဲမြို့တွင် အမျိုးသားနှစ်ဦး တောင်ကျရေနှင့်မျောပါ ပျောက်ဆုံးနေ
ကယားပြည်နယ် ဘော် လခဲမြို့တွင် ချောင်းအတွင်း ရေ ချိုးနေသော အမျိုးသားသုံးဦး တောင်ကျရေနှင့် မျောပါပြီး နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေ၍ ရှာဖွေကယ် ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသည်။
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း ကြို့ပင်ပေါက်မြို့ အောင်မြင်မြင့်မိုရ်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံရှေ့တွင် ခရီး သည်တင် အမြန်ယာဉ်နှင့် ကုန် တင်ယာဉ်တိုက်မိရာ တစ်ဦးသေ ဆုံးခဲ့ကြောင်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့ မြတ်မွန်စေတနာကလျာဏ မိတ္တနာ ရေးကူညီမှုအသင်းမှဦးဌေးနိုင်ဦးက ပြောသည်။
ထိုင်းဘုရင်နန်းတက်ပွဲ ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်တွင် သေဒဏ်ကျမြန်မာလုပ်သားလေးဦး ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ခံရ
ထိုင်းဘုရင်မဟာဗာဂျီ ရာလောင်ကွန်နန်းတက်ပွဲအဖြစ် အကျဉ်းသားများ ပြစ်ဒဏ်ကင်း လွတ်ခွင့်ပေးကာ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ ဘန်ခွမ်အကျဉ်းထောင်တွင် သေဒဏ်အကျဉ်းကျနေသည့် မြန် မာလုပ်သားလေးဦးကို ထောင် ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းသို့ လျှော့ပေါ့ပေးပြီး နှစ်ကြီးသမားအဖြစ် အကျဉ်းကျနေသည့် မြန်မာလုပ် သား ၁၀ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ် ခွင့်ပေးကြောင်း မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့မှ ဦးမင်းဦးက ပြော သည်။
မိုးလယ်ကာလ မိုးများ၍ ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ထားရန် ဒေါက်တာထွန်းလွင် တိုက်တွန်း၊ မုတ်သုံလေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သို့ ၀င်ရောက်နေ
အနောက်တောင်မုတ်သုံ လေသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ စတင်ဝင်ရောက်နေ၍ မိုးကြိုးနှင့် လေပြင်း အန္တရာယ် သတိပြုရန် နှင့် လာမည့်မိုးရာသီတွင် ပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်၍ ရေဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရန် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က တိုက် တွန်းသည်။
အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအတွက် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှု သုံးဆတိုးလာဟု လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးပြော
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုး သမီးနှင့် ကလေးများအတွက် လူ မှုရေးကဏ္ဍတွင် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှု သည် လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်ကထက် သုံးဆတိုးမြင့်လာကြောင်း လူမှု ၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန် လည်နေရာထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးက ပဋိပက္ခများအ တွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း ဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေး နိုင်ငံတ ကာညီလာခံတွင် ထုတ်ဖော်ပြော ကြားသည်။
၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင် နှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် တစ် နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာကျောင်း များ၌ မေလ ၂၅ ရက်ကစကာ ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီး ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိကျောင်းများ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကျောင်း နယ်မြေကျော်ကာ ကျောင်းအပ်မှု မရှိစေရန် ကျောင်းသားသစ်များ ကို အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြင့် စိစစ် လက်ခံနေသည်။
ဂူးဂဲလ်နှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းရေး ဆွေးနွေးနေဟု ဟွာဝေးမြန်မာတာဝန်ရှိသူပြော
Google နှင့် Huawei အကြား မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ် တွင် နည်းပညာအရ ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေး နွေးနေသည်ဟု Huawei မြန်မာ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေ ဂျာ Mr. Zhu Bo က ပြောသည်။
လူဒိုဂိုရက်စ်အသင်း ဘူလ်ဂေးရီးယားချန်ပီယံဆုကို ရှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရရှိ
လူဒိုဂိုရက်စ်အသင်း သည် အိမ်ကွင်းတွင် ချာနိုမိုးဗာနာ အသင်းကို ၄-၁ ဂိုးဖြင့် သက် သောင့်သက်သာအနိုင်ရရှိပြီး ဘူလ်ဂေးရီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ကို ရှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးနေ့ နိုင် ပွဲသည် ဧည့်သည်အသင်း၏ မတောင့်တင်းသောအသင်းကို ပွဲ ထွက်ခိုင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ကြောင့် အရိပ်မည်းထိုးခဲ့သည်။
တပ်မတော်နှင့် AA တိုက်ပွဲများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးထိခိုက်နိုင်ဟုဆို
တပ်မတော်နှင့် အေအေ တိုက်ပွဲများကြောင့် မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေသည့် နေ ရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက် ခံရေးအစီအစဉ်ကို တစ်စိတ်တစ် ပိုင်းထိခိုက်စေသည်ဟု နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန် ကြီးဌာန
မေလ ၂၄ ရက်ညက က စားခဲ့သော ပြင်သစ်လီဂူးဝမ်းရာ သီပွဲစဉ်တွင် မိုနာကိုသည် နိစ်ကို ၂-၀ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း တန်းတင်ကျန်ခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်း မြို့သာ စက်မှုဥယျာဉ်တွင် ဆေးခြောက် စိုက်ပျိုးသည်ဟု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် စိုက်ခင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် သုတေသနပြုသူများကို မြန်မာ တရားရုံးက တရားစွဲရန် ဆုံးဖြတ် ခြင်းသည် ဌာနဆိုင်ရာချိတ်ဆက် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသာ ဖြစ် သည်ဟု III M Global Nutrac
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒိုင်း ရှုံးထွက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အကြို ဗိုလ်လုပွဲ ပထမအကျော့တွင် ရှမ်း အသင်းက ရခိုင်အသင်းကို ၄-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။
တွစ်တာမှာ Follower သန်း ၂၀ ပထမဆုံးရတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်လာတဲ့ BTS အဖွဲ့
မေလ ၂၄ ရက် ဒေသစံ တော်ချိန် နေ့လယ် ၂ နာရီခန့်က အမျိုးသားကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ BTS ၏ တွစ်တာအကောင့်တွင် Followers သန်း ၂၀ ပြည့်ခဲ့ပြီး ယင်း မှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်သော ပထမ ဆုံးကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ ဖြစ် သည်။
အက်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့ One Direction အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း လျံပေးနီ
One Direction အဖွဲ့ ၀င်ဟောင်း လျံပေးနီက West Side Story ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုခံယူ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားကာ အက် ရှင်ဇာတ်ကားကြယ်ပွင့်တစ်ဦး ဖြစ်လိုကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း နောက်တန်းကစားသမားနှစ်ဦး အားဖြည့်
ရန်ကုန်အသင်းသည် မြန်မာလိဂ် ဒုတိယအကျော့အ တွက် မကွေးအသင်းမှ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဟောင်း နောက်ခံလူ ကျော်စွာလင်းနှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသား နောက်ခံလူ အန်ဒါဆင်တို့ ကို ခေါ်ယူခဲ့သည်။
အကယ်ဒမီရပြီး အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် လောဘကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ
ပါဝင်သည့် သရုပ်ဆောင်နှင့် ဇာတ်လမ်းပေါ်မူတည်ပြီး လာ ရောက်ကမ်းလှမ်းသည့် အပြိုင်ဇာတ်ရုပ်များကိုပါ မငြင်းဘဲ လက် ခံရိုက်ကူးဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူက ပြော သည်။
အောင်သူအတွက် မည်သည့်အသင်းထံမှ ကမ်းလှမ်းမှုမရသေးကြောင်း ရတနာပုံအသင်းပြော
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးအောင်သူသည် လက်ရှိကစားနေသည့် ထိုင်းလိဂ်က လပ် မြောင်တောင်အသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ယမန်နေ့အထိ မည်သည့်အသင်းထံမှ ကမ်းလှမ်းမှု မရသေးကြောင်း မိခင်ရတနာပုံအသင်း အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးအောင်ဟိန်းခိုင်က ပြောသည်။